ဆရာ လင်းညို့တာရာ အာရုံရသည့် "အမှောင်မြေ၏ တယောသံ ဟောကိန်းများ" - Zet Star
နိမိတ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ခံရရှိနေတာ တစ်ပတ်ခန့်ရှိပါပြီ။ အခြေအနေတစ်ခုကို စောင့်ကြည့်နေလို့ ဘာမှသတိမပေးဖြစ်တာပါ။ အခြေအနေတစ်ခုထက်မက သတိထားမိနေတာကြောင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သတိထားနိုင်အောင် ဤဟောကိန်းအား ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ရပါသည်။ ဒီဟောကိန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတိုင်မီအထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၁. မကြာခင်အတောအတွင်း အနုပညာရှင်လောကသားအတွင်း အသုဘသတင်းများ ထပ်မံကြားရလိမ့်အုန်းမည်။ ၂. ကိုရိုနာ သံသယလူနာများ အရင်ထက် ရာခိုင်နှုန်း အလွန်မြင့်တက်လာတော့မည်။ ၃. အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ အားလုံးတို့၏ အရှုပ်ထုပ်များကြောင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အရှုပ်များ ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ၄. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတစ်ခုလုံးအား လှုပ်ခတ်သွားမည့် သတင်းဆိုးတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
၅. တိရစ္ဆာန်များ သမရိုးကျမဟုတ်ဘဲ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေဆုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ၆. သမရိုးကျမဟုတ်သော ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတစ်ချို့ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ၇. ပုံမှန်ထက် သရဲတစ္ဆေများ သတ်သေမှုများ များပြားလာသည့်အတွက်ကြောင့် လေလွှင့်သရဲ တစ္ဆေများ တိုးပွားလာတော့မည်။ ၈. ဟောကိန်း ၅.၆.၇ ဖြစ်တာ စိပ်လာပြီဆိုလျှင်မူ ဆိုးရွားသော နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှု ဖြစ်မည်။
၉. အများသူဌာ ကြည်ညိုလေးစားခံရသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ တစ်ယောက်ထက် မနည်း သေဆုံးမှု ဖြစ်လာတတ်သည်။ ၁၀. စီးပွားရေးရှုပ်ထွေးပြီး ဒေါ်လာဈေးများ သိသာစွာ ထိုးကျလာတတ်သည်။ စီးပွားရေးပျက်ကပ်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ၁၁. အများမျှော်နေသည့် သတင်းဆိုးလာခါနီးနေပါပြီ။ ဘာသတင်းလည်း မသိပါ။ နီးကပ်နေပီဆိုတာတော့ သတိထားမိပါသည်။
← ကောင်မလေးတယောက်ကြောင့် ကောင်လေး ၅ ယောက် Q ဝင်သွားရခြင်း (ကြံကြံဖန်ဖန် ဖြစ်တတ်တယ်)
ယနေ့အထိ မပျက်ပြယ်သေးတဲ့ ဗိဿနိုးဘုရင်မရဲ့ အမုန်းကျိန်စာနဲ့ မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ ပန်ထွာ ဝိညာဥ် →
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းပေါ်တွင် ထူးဆန်းတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီး ရောက်နေ